Dagaalka Jidhdilka – Oppdragarvald
Ka baxsiga wareeg xun﻿
Carruur korsiimo aan rabshada lahayn
Dagaalka aan tooska aheyn
Daqaalka iyo xadgudubka galmada
Natiijada ka timaada dagaalka
Sida caawimo loo helo:
Carruurtu waa farxadeena ugu weyn. Waalid ahaan, waxaynu sameynaa waxkasta oo aynu awoodno si aynu iyaga ugu korino inay noqdaan dadwaaweyn oo sugan oo guuleysta. Marmarka qaarkood ayaa, awoodaha, jidhka dareenka ama maskax ahaaneed ay yihiin qalabka kaliya ee aynu haysano si aynu xad ugu sameyno, laakiin si cad uma ogin ilaa inta ay dhaawac iyo cabsi carruurta soo gaadhsiin karaan. Ciqaabta jidhdilka ayaa xaqiiq ahaan sharci darro ah Norway. Isticmaalka xoogga ayaa waxa uu noqon karaa wax qaabka soo noqnoqda ah oo barbaarinta ilmaha ku jira. Laakiinwaxa jira hab fudud oo looga baxo wareeggaa xun.
Heshiiska QM ee Xuquuqda Ilmahu wuxuu dhigayaa in dhammaan carruurtu ay xaq u leeyihiin guri ammaan ah.
Norway waxay saxeexday heshiiska Qaramada Midoobey sanadii 1990 sida ay sameeyeen 193 dal oo kale. Heshiiskan waxa uu sharaxayaa xuquuqda aasaasiga ee dhamaan dadka aan qaangaadhka aheyn, tusaale ahaan dadka da’yarta ah ee ka yar 18 sanno jir. Heshiisku waxa uu sharaxayaa xaaladaha aasaasiga ah ee uu ilme kastaa oo dunida joogaa loo ogolaado inuu ku noolaado. Taasi xaqiiqdii waa sharci halkan, maxaa yeelay Norway waxay saxeexday oo ay ansaxisay Heshiiska. Waxa uu CRC qeexayaa tusaale ahaan in dhamaan carruurtu ay leeyiin xuquuqda carruurnimo oo amaan ah, xoriyda haddalka iyo wax u gaar ahaanta.
Heshiiska QM ee Xuquuqda Ilmaha
Xeerka Norway ee Carruurta, § 30
Xeerka Norway ee Ciqaabta, § 282
Xiriir kasta oo jidhka lala sameeyo kaas oo xanuun leh ama hakiya dhaqdhaqaaq.
Dagaalka Jidhdilka waxa uu noqon karaa: ilmaha oo hoos loo foorariyo, in ilmaha loo diido inuu dibedda u baxo, inay dabada laga dhirbaaxo, in cunaha la qabto, in la laago ama in wajiga ama jirka wax lagaga dhufto iyadoo la isticmaalaayo ama aan la isticmaaleyn shay.
Waxa kale oo ay noqon kartaa in timaha la jiido, la qanjiiriyo, gacanta la marooojiyo, la riixo, la ruxo iwm.
Sidee ayaad u soo barbaartey?
Miyaad la kulantay dabeecad handadaad leh ama ciqaabta jidhka oo waalidkaagu kuu geystey?
Sidee ayay caruurnimadaadii kuu saameysay adiga?
Marka aad ka fikirto adiga carruurnimadaadii, miyaad wax ka dhaxashay barbaarintaadii kuwaas oo ku saabsan sida carruurta loo koriyo?
Miyaad carruurnimadaadii la kulantay wax kuwaas oo kuu keena inaad si markasta si ka duwan sidii waalidkaa u dhaqanto?
Haa, carruurtu marmarka qaarkood way naga cadhaysiin karaan, iyadoo waalid walbana wuu marmarka qaarkood xanaaqi karro.
Miyaad la kulantay xaalado la mid ah, halkaas oo aad xoog u xanaaqday oo aad u dhowaatay inaad isticmaasho dagaal jidhka ama mid maskaxda ah ama aad dhab ahaantii noqotey mid dagaal isticmaala?
Maxaa kaa hor istaagey inaad noqoto mid dagaal sameeya?
Sidee ayaad u aragtaa xaaladaada hadda?
Ereyada, luqadda jirka ama isticmaalka codka si loogu dhibo, loogu hanjabo ama loogu xakameeyo qof kale.
Dagaalka maskaxda waxa uu noqon karaa
hanjabaad, ereyo xunxun, dhibis ama u cagojugleyn, ku jees jeesid, faquuqid ama habdhaqan
iska indhatiridhab hanjabaada ah iyadoo wax la jabinaayo ama la tuuraayo, iyo/ama wax garaacida ama wax laagida sida alaabta guriga, derbiyada ama albaabada
u dhaqma hab hanjabaad leh iyadoo la isticmaalaayo luqad jidhka sida isha ku gubida, feedh u duubashada ama inaan laga istaagin masaafad ixtiraam muddan
u dhaqma hab hanjabaadda lehiyadoo la isticmaalaayo dabeecad ama calaamado ilmaha xasuusiya dhacdooyinka hore oo dagaal ah
dareenqalafsan oo naceyb ka buuxo sida baadhitaan ku sameynta telefoonka gacanta ee ilmaha, ka shakiga ama dusha ka saarida eedayn aan caddaalad ahayn
dhijitaalka, tusaale ahaan, iyada la soo maraayo telefoonka gacanta/fariinta, internetka ama warbaahinta bulshada
Rabshadaha ka dhanka ah dadka, carruurta ama dadka waaweyn ee ku dhowdhow ilmaha.
Dagaalka aan tooska aheyni waa dagaal si ka duwan loo dareemaayo.
Waxa laga yaabaa inuu ilmuhu joogo xaaladaha noocaas ah oo kale, isagoo arkaaya oo maqlaayana waxa dhacaya.
Ilmuhu waxa uu sidoo kale dagaal markhaati ka noqon karaa isagoo ay dhagto ugu soo dhaceyso dhacdo qol kale ka dhaceysa. Malo-awaalka ayaa si fudud u saameyn kara sida uu ilmuhu uga fikiraayo waxa socda.
Ilmuhu waxa uu sidoo kale markhaati ka noqon karaa dagaal isagoo marka uu guriga ku soo laabto arka waxyaalo jajaban ama xubin ka mid ah qoyska oo waxyeello ama dhaawac soo gaadhay.
Dhammaan noocyada falalka galmoodka ah sida in lagu cadaadiyo, la qasabo ama loogu hanjabo inuu qofku sameeyo wax ku lid ah rabitaankiisa.
Weerarka galmadu ma aha inuu marwalba ku kamid ahaado xiriir jidhku:
Luqad galmo la xiriirta, waxyaalo xunxun oo la is tuso, sawir, filimo, daawashada filimada xunxun, in qof lagu qasbo inuu daawado fal-galmo ah ama iyaga laftooda lagu qasbo inuu sameeyo fal galmo ah
Weerarka galmo kaas oo ay ka mid yihiin xiriir jidhku waxay noqon kartaa:
Taabashada, salaaxida, leefida, jaqista, siigeysiga, ficilada lagu qanjilaayo galmo, galmo la galiyo/la isku taggo iyo kufsi
In la soo maroo rabshado ayaa waxay keeni kartaa dhibaatooyin jidhka iyo maskaxda ah iyo xanuun dareenka/maskaxda;waxyeeladu waxay noqon kartaa mid muddo dheer waarta.
Dhibaatada ka timaada waalidka ama ta ka dhexeysa waalidiinta ayaa waxay cawaaqib xun u keeni kartaa ilmaha. Dagaalka ka dhaca guriga ayaa waxyeello weyn keena sababtoo ah guriga waa booska ugu muhiimsan nolosha ilmaha ee ammaanka iyo koritaankaba. Xidhiidhka uu ilmahu la sameeyo daryeelahiisa ugu dhow ayaa ah mid muhiim aad u weyn koritaanka ilmaha u leh.
Carruurta ay soo gaadho dagaalku ayaa heli karra dhibaatooyinka sameysiga xiriirka bulshada, dhibaatooyinka hurdadda, dhibaatooyinka waxbarashada, iyo dhibaatooyinka dagaalka iyo welwelka.
Dagaalka maskaxdu wuxuu noqon karaa mid waxyeello xun oo la mid ah ta dagaalka jidhdilka ah leh.
Dareenka maskaxda ee ku hadha marka la arko dagaal ayaa waxay noqon kartaa qaar leh waxyeelo la mid ah waxyeellada soo gaadha marka ilmaha loo geysto dagaal.
Waxa jira xiriir toos ah oo u dhaxeeya waaya-aragnimada naxdinta leh ee carruurnimadda iyo dhibaatooyinka caafimaad ee marka qofku weynaado, maskax ahaan iyo jir ahaan labadaba.
Ilme caruurnimadiisa soo maray qoys rabshado leh ayaa waxa kordha fursadda uu ku dhacaayo xidhiidh rabshado watta marka uu weynaado, ama inuu yahay xadgudbaha ama dhibbanaha.
Rabshadaha ku dhaca xiriirka dhow ayaa la isagu gudbin karaa jiilal. Waxaan u baahannahay inaan samayno waxa aan awoodno si aan u jebinno wareegga xun ee rabshadaha ee ka qeybta ah korinta ilmaha.
Carruurtu waxay sida ugu fiican wax ugu bartaan iyagoo la ammaanaayo oo la dhiirigelinaayo, taasina waxay dhiiri gelin kartaa wadashaqeynta qoyska.
Dhamaan waalidiinta oo dhan way ogyihiin inaanay carruurtu had iyo jeer u dhaqmin sida aynu rabno. Tani waxay keentaa dareen niyadjab ah iyo cadho waxayna adkeyneysaa wada shaqeynta. Tani waxay noo horseedi kartaa wareegga xun oo ay calaamad u tahay muran iyo, ta ugu xun, dagaal jidhka ama maskax ah. Waxaynu caadi ahaan ka bixi karnaa wareegaas xun iyadoo aynu sameyno isbaddallo yaryar oo dhaqankeena ah.
Tallo wanaagsani waxa weeye in tan ilmaha looga dhigo sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
U sheeg ilmaha waxa la sameeynaayo: “Fadlan jaakeedaada meesha sudh.”
Ha u sheegin ilmaha waxa ay tahey inaanu sameyn: “Jooji inaad jaakeedaada dhulka ku tuurto!”
Ha isticmaalin su’aalo: “Miyaad jaakeedkaaga sudhi kartaa?”
Sii waddo inaad indhaha la sii raacidid ilmaha marka aad isag/iyada siiso farriin, si loogu hubiyo in fariinta la qaatey.
Shan jeer in ka badan cabashooyinka sii ammaan! Caruurtu waxay si fiican wax ugu bartaan marka la amaano ee la dhiiri galiyo.
Noqo mid si toos ah wax ugu abaara markaad wax amaaneysid, si uu ilmuhu ugu fahamo waxa uu isagu/iyadu ay sida fiican ugu qabatay: “Waad ku mahadsantahay intaad jaakeedkaaga meesha sudhay!”
Mararka qaarkood waxa aynu u baahannahay inaan sameyno xuduudo cadcad ama aynu fariin ugu dirno inaanay wax okay aheyn. Waxa wakhtigaas sahlan in la xanaaqo ama codkaaga kor loo qaado.
Si looga fogaado xaaladaha noocaas ah oo kale inay ka sii xumaadaan, ama in ilmuhu qalad u fahmo, waxa muhiim ah:
In qofka weyni uu ogaado waxa sharcigu yahay.
Iyo in uu ilmuhu sidoo kale fahmo waxa uu xeerku yahay
In dadka waaweyni ay ogolaadaan waxa xeerku yahay
Kula hadal cod saaxiibtinimo leh, laakiin si adag ah
Miyaad u baahan tahay qof kula hadla mise waxaad rabtaa macluumaad ku saabsan sida loo helo caawimo?